Samsung dia efa marika faharoa amidy faharoa amin'ny akanjo | Androidsis
Samsung dia manana fanatrehana eo amin'ny tsenan'ny entina entina
Eder Ferreno | | About us
Samsung dia nanolotra ny famantaranandrony vaovao amin'ity herinandro ity, ny Galaxy Watch Active 2. Ny marika Koreana dia misy valiny tsara eo amin'ny sehatry ny akanjo, noho ireo famantaranandro ireo na ny fehin-tànany marani-tsaina. Avelan'izy ireo fitaovana vaovao izahay. Navoaka izao ny tarehimarika momba ny varotra amin'ity ampahan'ny tsena ity amin'ny telovolana faharoa.
Toy ny efa hitranga amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity, Samsung dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha tsara eo amin'ity sehatry ny tsena ity. Raha ny marina dia izy ireo no marika faharoa amidy faharoa ao aorian'ny Apple. Valiny tsara ho an'ny marika Koreana amin'ity fomba ity, izay manohy mandroso tsara.
Tamin'ny telovolana faharoa tamin'ity taona ity, Samsung dia efa nivarotra fitafiana roa tapitrisa (famantaranandro maranitra sy fehin-tànana). Na dia lavitra be amin'ny varotra Apple aza izy ireo, izay namidy singa 5,7 tapitrisa tamin'ny vanim-potoana iray ihany, dia nanampy azy ireo hahazo ny toerana faharoa amin'ity tsena ity.
Ankoatra izany, maneho fitomboana tsara ho an'ny mpamokatra Koreana. Nampitomboina avo roa heny ny varotra raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa, ary mahavita mampitombo ny anjarany amin'ny tsena koa izy ireo. Noho izany dia mandeha tsara ny orinasa amin'ny sehatry ny fitafiana, noho ny havaozina.
Raha ny marina, Samsung dia lasa manana anjaran-tsena 11% haka 16%. Famantarana tsara fa nihatsara ny toe-javatra misy anao eo amin'ity tsena ity. Ny vokatra toy ny Galaxy Watch Active no tompon'andraikitra amin'ireo varotra tsara ireo.
Apple sy Samsung dia mizara an'ity tsena ity amin'ity fomba ity. Izy ireo dia marika mitovy amin'ny manjaka amin'ny tsenan'ny takelaka, izay naseho koa tamin'ity herinandro ity. Ka nahavita nihoatra ny fahaizan'ireo mpifaninana aminy amin'izany lafiny roa izany. Manana ny sasany amin'ireo famantaranandron'ny marika Koreana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung dia manana fanatrehana eo amin'ny tsenan'ny entina entina
Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba famakiana ao amin'ny Google Chrome
Ny Samsung Galaxy M10 dia mandalo ny tanan'i Geekbench miaraka amin'ny Exynos 7885